kuvamile ukuba nazo lapho bebhekene umhawu. Ngezinye izikhathi kungcono ngisho ngempela cute lapho umfana unomona futhi wenza okuthile okungabantu akuyona sobuntu bakhe, isibonelo, phambi kwabo bonke ungeniswe othandweni. Umhawu ngezinye izikhathi iqhubezela umfutho ukuze amaxhama, kungazelelwe abantu bayaqaphela ukuthi ngempela abakwazi ukuphila ngaphandle nomunye. Umhawu onjalo iziqephu akufanele kube njalo futhi, futhi ngokuqinisekile ngeke kudlule kohlaka nokuhlonipha umlingani.
Nokho, ngokuvamile kwenzeka ukuthi umona sihamba yonke imingcele, iba imbangela izingxabano nsuku zonke futhi izimpi, ngezinye izikhathi kukhona umhawu yesikhathi esidlule, ikakhulukazi uma une okuthile ukukhumbula, nomhawu bonke abanye, kuhlanganise nabangane, osebenza nabo, njll
zokupheka ezithile indlela yokunqoba umhawu alikho, ngoba bonke abantu zihlukile futhi akunakwenzeka ukuthi iyiphi indlela siphumelela ngokwengeziwe kulezi ezimbili.
Kulokhu nzima sidinga indlela siqu umlingani ngamunye. Zombili eyeduna umhawu zesifazane injabulo encane ubudlelwane futhi abulale konke yayakhiwe uthando nozwano.
Uma ubuhlobo bakho ubonakele umhawu ngokweqile kanjani ukulwa naso, ungafunda kusuka kulesi sihloko.
Ngakho, liyini komhawu?
Umona - ukusabela okungekuhle ekuphenduleni ukuntuleka (nobe kungazuzi obukhona) nokunakwa umlingani, lapho kukhona ukusondelana ngokomzwelo.
Lapho umona Ngokuvamile ubonakaliswa isimo sengqondo ubudlelwane, uzakwethu ubhekwa nomona, ezinye izazi zokusebenza kwengqondo kanye psychiatrists akubheka ngayo njengoba umugqa phakathi imizwa enempilo futhi kabuhlungu. umhawu ngokweqile libhekisela kuwukubonakaliswa neurosis ubuntu Neurotic.
Ngezinye izikhathi kuyenzeka uma lo mugqa ewela, nomhawu ingena esigabeni izimpawu zokwelashwa. Ezimweni ezinjalo, kunengozi enkulu ka ukuvela kuthinte (kokubheduka ngokomzwelo) kuze mona ukuthi ngokuvamile ihambisana nezenzo zobudlova ngokwabo noma maqondana nomngani wakho.
Umona kanjani ukulwa naso, ungakwazi ukuqonda nje ngokuhlaziya ukuziphatha umlingani wabo. Kumele baqonde, kwezinye izimo, yena (it) kukhona flash wesikhwele, nalokho abantu noma izenzakalo ixhunyiwe, njengoba umhawu eboniswe, njll Qiniseka bona siqiniseke okungukuthi, mhlawumbe ngempela ukunikeza isizathu abe nomhawu nengxenye yakhe yedwa, futhi mhlawumbe phakathi nje wena akukho reciprocity, futhi wena ndawonye kuphela kusuka amandla esejwayezi ayenza.
Uma ubona-ke bona, wena hlaziya, kakade uthole eziphethweni. Uyazi, okungenani, izizathu ingxenye yakhe. Futhi mhlawumbe ekuqedeni kubo, ubudlelwane kuyothuthuka, futhi umbhangqwana yakho uyobusa "nokuthula nothando".
Kodwa uma lokhu akwenzeki, khona-ke kudingeka afune imbangela kuye (it). Into yokuqala okudingeka ukuba nje ushayele umlingani e nengxoxo evulekile, futhi nje ukukhuluma yini uyakuhlupha, ungitshele ukuthi ukhathazwa ngakho futhi basebenze ndawonye ukuze uthole ezinye ikhambi lale nkinga. Futhi akudingeki ukuba bazibuze ukuthi ukubhekana Umhawu ka wakhe? Qiniseka ukuthi oshade naye wayefuna ukwenza kanjalo, kodwa akazange alinge. Akulula kanjalo njengoba kubonakala.
Uma umlingani wakho akafuni ukuxoxisana, futhi akezi ukuthintana ngqo, izingxabano futhi engemihle ngesandla sakhe (wakhe) uyaqhubeka, kuhle ukucabangela, futhi uma kudingeka othile ongenayo ngisho ufuna ukulalela futhi bakuzwe. Noma mhlawumbe nje vampire ezingokwengqondo, futhi ithola amandla kuwe lapho ukuxabana, ukwahlukana. Ngakho unikeza abantu uhlobo ujabula ngokwenza kanjalo, ngisho nabo ngokwabo, kungase kungabi asiqaphele. Kodwa, uma basamthanda lowo muntu futhi ufuna ukuba naye, khona-ke nje kudingeka ufune iseluleko owelapha abanolwazi. Ezimweni ezinjalo, kuphela uchwepheshe oqeqeshiwe uzokwazi ukuxazulula inkinga yakho.
Mark Dacascos (Marku Dacascos): Umlando kanye Filmography umlingisi (esesithombeni)
Acer 5250: ephelele entry level laptop kamakhi ovelele imishini computer